Covid-19 Migration survey – Centre for Economic and Social Development
မြန်မာ့ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည် ကူးစက်ရောဂါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လက်ရှိနှင့် မကြာသေးခင်အထိ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာ့ရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအပေါ် COVID-19 ၏ သက်ရောက်မှုများကို လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ယခု စစ်တမ်းအား ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တမ်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက် အချက်အလက်ကို အခြေခံသော အကြံပြုချက်များအား ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေး ကုစားမှု မူဝါဒ ချမှတ်သူများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များ၊ အလှူရှင်များနှင့် အခြားကူညီထောက်ပံ့သူများအား ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤစစ်တမ်းမေးခွန်းများကို လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ နှင့် ထိုင်းမှ ဧပြီလအတွင်း ပြန်လာကြသော အလုပ်သမားများက မိမိအတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုပေးရန် လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ယခုစစ်တမ်းမှ သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို လျှို့ဝှက်အနေဖြင့် ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး သုတေသနလုပ်ငန်းများ အတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
The Centre for Economic and Social Development (CESD) is conducting the “ Survey on The Effects of COVID-19 Pandemic on Myanmar Migrant Workers in Thailand” in order to analyze and inform policy options and support policy makers, development partners, donors and stakeholders with evidence. We woud like to kindy request the migrant workers who are currently in Thailand or who just returned from Thailand in April to respond the questions based on own experiences. Information collected from this survey will be kept confindential and will only be used for research purposes.
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ - Click here to begin survey